ပင်လယ်သေမှသက်သေများ အပိုင်း (၂) | Calvary Burmese Church
Dead Sea Scroll ရှေးကျမ်းစာများကို ပင်လယ်သေ ၏ အနောက်မြောက် ကမ်းခြေ ရှိ ဂူပေါင်း ၁၁ ခု၏ အတွင်းမှ ၁၉၄၇ နှင့် ၁၉၅၆ ခုနှစ်များအကြားတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ထိုဒေသသည် ဂျေရုရှလင်မြို့မှ ၁၃ မိုင်အကွာအဝေးတွင် ရှိပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် ပေ ၁၃၀၀ တွင် ရှိသည်။ အဆွေးမြေ့ဆုံးသောကျမ်းလိပ်များကို တွေ့ရှိရသည့် ဂူ နံပါတ်အတိုင်း အမည်နံပါတ်ပေးထားသည်။ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏ အကြီးကျယ်ဆုံးသော ရှေးဟောင်းစာပေ၊ ပုရပိုဒ် တွေ့ရှိမှု အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဂူအမှတ် ၁ နှင့် ၁၁ မှတွေ့ရှိရသည့် ကျမ်းလိပ်များသည် ပျက်စီး ဆွေးမြေ့ ယိုယွင်းခြင်းလုံးဝမရှိဘဲ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရှိသည်။ ဂူအမှတ် ၄ တွင် အများဆုံးတွေ့ရှိရပြီး ပုရပိုဒ်ကျမ်း ပေါင်း ၅၀၀ ခန့်၏ အပိုင်းအစ ၁၅၀၀၀ ကျော်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
Dead sea scroll များတွေ့ရှိရာဂူများ
ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်တို့၏ဖော်ထုတ်ချက်အရ တွေ့ရှိရသည့် ကျမ်းလိပ်များနှင့် အပိုင်းအစများအားလုံးတို့သည် ကျမ်းပုရပိုဒ် လိပ် ၈၂၅ မှ ၈၇၀ တို့၏အပိုင်းအစများဖြစ်သည်။
တွေ့ရှိရသည့် ပုရပိုဒ်လိပ်အားလုံးကို အဓိကအမျိုးအစား ၂ မျိုးအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ပထမအမျိုးအစားသည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်သက်ဆိုင်သော ကျမ်းပုရပိုဒ်လိပ်များဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယအမျိုးအစားသည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် မပတ်သက် သည့် ပုရပိုဒ်လိပ်များဖြစ်သည်။ ဟေဘရူးကျမ်း (Hebrew Canon) (သို့) ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ဧသတာဝထ္ထု မှလွဲ၍ ကျန်သည့် ကျမ်းအားလုံး တို့၏ အပိုင်းအစများကို တွေ့ရှိရသည်။
ဟေရှာယ ကျမ်းစာလိပ် ၁၉ လိပ်၊ တရားဟောရာကျမ်းလိပ် ၂၅ လိပ် နှင့် ဆာလံကျမ်းလိပ် ၃၀ တို့ကိုတွေ့ရှိရသည်။
ယနေ့အသုံးပြုသော သမ္မာကျမ်းစာ (Bible) တွင် မပါရှိသော ဟေယကိမင်းကြီး၊ ရေယမိ နှင့် ဒံယေလ တို့၏ ဗျာဒိတ် ကျမ်းလိပ်များကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။
တွေ့ရှိရသော ကျမ်းလိပ်များထဲမှ ဟေရှာယ ကျမ်းလိပ်ကို အပြည့်အစုံ မပျက်မစီးတွေ့ရှိရပြီး ပညာရှင်များ၏ တွက်ချက်အရာ သက်တမ်း နှစ် ၁၀၀၀ ရှိကာ၊ ပြန်လည်တွေ့ရှိရသော ဓမ္မဟောင်းကျမ်းလိပ်များ အနက် သက်တမ်းအရင့်ဆုံးကျမ်းလိပ်ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်ဘုရင် နှင့် ယောရှုတို့ကို စပ်ဆိုသည့် မကြားဖူး၊ မဖတ်မမြင်ဖူးသော ဆာလံကျမ်းများကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာလိပ် မဟုတ်သော ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် commentaries များ၊ ဥပဒေကျင့်ထုံးများ၊ လူမှုရေးရာ ကျင့်ဝတ်နီတိများ၊ စစ်မှုရေးရာနည်းဗျုဟာများ၊ ချီးမွမ်းခြင်းဆာလံသီချင်းများ၊ ဓမ္မတေးကဗျာများ၊ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာကျင့်ထုံးများ နှင့် ပညာပေးကျမ်းလိပ် များတို့ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။
ကျမ်းလိပ်အများစုကို ဟေဗြဲ ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားထားပြီး အရေမိ ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသော ကျမ်းလိပ် အမြောက်အများကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ အရေမိ ဘာသာစကားသည် ခရစ်တော် မမွေးခင် ရာစုနှစ် နှစ်ခုမှ ခရစ်တော်မွေးဖွားပြီး ရာစုနှစ်နှစ်ခှုအတွင်း (BC 200 to AD 200 ) ပါလက်စတိုင်း ဒေသတွင်နေထိုင်သည့် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ရုံးသုံးစကား၊ ဘုံစကားဖြစ်သည်။ ဤတွေ့ရှိရသော Dead sea Scrolls များအားဖြင့် ရှေး ဟေဗြဲဘာသာ နှင့် အရေမိ ဘာသာစကားတို့ကို ပြန်လည်လေ့လာခြင်းကို များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဂရိဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားသော ကျမ်းလိပ် အနည်းငယ်ကို လည်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ AD 66 – 70 အတွင်းဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် နယ်ချဲ့ကျူးကျော်လာသည့် ရောမစစ်တပ်ကို တော်လှန်သော ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ပထမအကြိမ် တော်လှန်ရေးကြီးအတွင်း ဂျူးစာကြည့်တိုက်တစ်ခုမှ ဤ ကျမ်းပုရပိုဒ်များကို ဤကျောက်ဂူကြီးများထဲတွင် ဖွက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်မည်ဟု ပညာရှင်တို့ကယူဆသည်။
ဤကျောက်ဂူကြီးများနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် ဘာသာရေးအဖွဲ့တစ်ခုနေထိုင်ခဲ့သော ကူမ်ရန် (Qumran) မြို့ဟောင်းကို ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် တူးဖော်တွေ့ရှိရပြီး Dead sea scroll ပုရပိုဒ်များနှင့် ပတ်သက်မှုရှိမည်ဟု ပညာရှင်များက ယူဆသည်။
ဤကျမ်းပုရပိုဒ်အများစုကို Essences ဟုခေါ်သော ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုမှ ဘီစီ ၂၀၀ မှ အေဒီ/စီအီး ၆၈ အတွင်းရေးသားသည်ဟုယူဆရသည်။ Essences အဖွဲ့ကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြရေးသားခြင်း မရှိသော်လည်း ထိုခေတ်ထိုအခါတွင် ရှိခဲ့သည့်စည်းကမ်းတင်းကျပ်သည့် ဘာသာရေးကျင့်ထုံးများကို လိုက်နာကျင့်သုံးသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး “ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောဆရာ” ဟုအမည်ပေးထားသော ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးမှ ဦးဆောင်သည်။ ထိုဘုန်းတော်ကြီးအား ဤအဖွဲ့ကို ဆန့်ကျင်သော ဘာသာရေးဝါဒီများက ဂျေရုရှလင်မြို့တွင်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။
ကူမ်ရန် (Qumran) အဖွဲ့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သူ၊ ရန်သူ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပြီး “Sons of Darkness” ဟုခေါ်သည်။ သူတို့ကို သူတို့ “Sons of Light” “The poor” ဟုခေါ်ပြီး “Members of the Way” ဟုလည်းခေါ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့နှင့် အတူရှိသဖြင့် သူတို့ကို သူတို့ “The holy ones” ဟုလည်းခေါ်ကြသေးသည်။
ယုဒ၊ လေ၀ိ၊ နဿလိ နှင့် မောရှေ၏ဖခင် အာမရံ တို့၏ နောက်ဆုံးသော နှုတ်ထွက်စကားများကို ရေးသားသည့် ပုရပိုဒ်များကိုလည်းတွေ့ရသည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အချက်တစ်ခုမှာ စာလိပ်တစ်ခုကို ကြေးနီပြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ဂူအမှတ် ၃ တွင်တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဤအလိပ်တွင် အစ္စရေးလ် နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးရှိ ပုန်းခိုရာလှိူ့ဝှက်မြေအောက်လှိုဏ်ဂူ ၆၄ ခု တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ဂျေရုရှလင် ဗိမ္မာန်တော်မှ ရွှေ၊ ငွေ၊ အမွေးအကြိုင်နံ့သာများ နှင့် ကျမ်းဂန် များကိုဖွက်ထားသည့် နေရာများဖြစ်မည်ဟု ပညာရှင်များက ယူဆသည်။
ဂူအမှတ် ၁၁ တွင်တွေ့ရှိခဲ့ရသည့် ဗိမ္မာန်တော်တွင်အသုံးပြုသည့် ကျမ်းလိပ်သည် အရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီး ယနေ့ တွေ့ရှိချိန်တွင် ၂၆.၇ ပေ အရှည်ရှိသည်။ မပျက်မဆီးသည့် မူလအတိုင်းအတာမှာ ၂၈ ပေ ခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ယနေ့အသုံးပြုသည့် သမ္မာကျမ်းစာများတွင် မပါဝင်သည့် ဧနောက်၊ အာဗြဟံ နှင့် နောဧ တို့၏ အချို့သော ဘ၀အစိတ်အပိုင်းများတို့ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ အာဗြဟံ ၏အကြောင်းတွင် သူ၏သား ဣဇာက် အားဖြင့် ယာဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်ရန် ဘုရားသခင်က အဘယ့်ကြောင့် ခိုင်းစေခဲ့သည်ကို ရှင်းပြထားသည့် ကျမ်းလိပ်များ ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။
ကျမ်းလိပ်အများစုကို သားရေးပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အချို့ကို ပေပုရပိုဒ်များဖြင့် ပြုလုပ်ကာ၊ ကြေးနီဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ကျမ်းလိပ်လည်းတစ်ခုရှိသည်။ ကာဗွန်ဖြင့် ပြုလုပ်သော မင်ကိုအသုံးပြုပြီး ညာဖက်မှ ဘယ်ဖက်သို့ ရေးသည့်စနစ်ဖြင့်ရေးသားသည်။
အချို့သော ကျမ်းလိပ်များကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် Wall Street Journal တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြော်ငြာပြီး ရောင်းချခဲ့ကြသည်။ “The Four Dead Sea Scrolls: Biblical manuscripts dating back to at least 200 BC are for sale. This would be an ideal gift to an educational or religious institution by an individual or group. Box F206.”
ကူမ်ရန် Qumran အဖွဲ့သည် သခင်ယေရှု သက်တော်ထင်ရှားစဉ်အချိန်တွင် ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း dead sea scroll များတွင် သခင်ယေရှု ၏သက်တော်စဉ်နှင့် တမန်တော် ၁၂ ပါးတို့ အကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြသည့် ကျမ်းလိပ်မရှိပါ။
ဂူအမှတ် ၁ နှင့် ၁၁ တွင်မပျက်မစီးတွေ့ရသော ကျမ်းလိပ်များကို ၁၉၅၀ နှစ်လွန်များတွင်ပြန်လည်ပုံနှိပ်ပြီး ယနေ့ ဂျေရုရှလင်မြို့၏ Shrine of the Book ပြတိုက်တွင် ထားရှိသည်။ ၁၉၅၀ နှစ်လွန်ကာလများတွင် ဂူအမှတ် ၄ မှရရှိသော ၄၀ % ခန့်သော စာလိပ်များသည် အလွန်ဆွေးမြေ့ကြသဖြင့် ကြည့်ရှုလေ့လာရန်မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါ။ နည်းပညာ တိုးတက်ပြောင်းလည်းလာမှုများကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်ရောက်မှ Biblical Archaeological Society မှ အားလုံးကို ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။
Dead sea scroll စာလိပ်များသည် ဂျူးနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များစွာတို့ကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်သည့် အလွန်အရေးပါသော အရာများဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။ အောက်ပါ ၀က်ဘ်ဆိုက် များမှစုစည်းကိုးကားတင်ပြပါသည်။
This entry was posted on March 29, 2011 by thawngno in Christianity Related Articles, Thawngno and tagged Thawngno.	Shortlink